ချစ်သင်ျ? ချစ်ခြင်းမေတ္တာဂိမ်း? အဘယ်ကြောင့်မရှေ့ဆက်သွားနှင့်ပေါင်းစပ်၊သင့်ရဲ့နှစ်ဦးတို့၏အကြိုက်ဆုံးအမှုအရာထဲကတစ်ခုနှင့်အတူခရီးရဲ့အဖြားပေးစေခြင်းငှါသင်တို့အချို့သောအလေးအနက်စွဲအရွယ်ရောက်ပြီးသူပစ္စည်း။ ဒီမှာသင်ျကွန်ပျူတာအားကစားပြိုင်ပွဲ၊ကျနော်တို့စွဲဖြင့်သင်၏အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးမှကြွလာသောအခါသင်ျအရေးယူနှင့်:ကျနော်တို့ပြုသည်ဟုယုံကြည်တယ်ကိုယ်ကိုယ်တစ်ဦးစုဆောင်းမှုများ၏အရေအပြိုင်အစီမံကိန်းများထွက်ရှိမယ်လို့လုံးဝသတ်သည်။ မမေးကြဘူးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုအဘယ်ကြောင့်အဘယ်သူမျှအနိုင်ရဖို့အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်၊ဒါပေမဲ့သိရှိအချို့သောအရသာလျှို့ဝှက်ချက်ငံပြာရည်ဒီမှာသွားမယ့်ကမ္ဘာကိုပြရုံမည်မျှကြီးမြတ်မိသားစုသံုးေနိုင်ပါတယ်။, မချစ်၏စိတ်ကူးကြီးသင်ျဂိမ်း? အဘယ်မှာရှိနေတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ပဲကြကုန်၏အားလုံးသင့်ရဲ့အလိုဆန္ဒများအတွက်မိခင်၊သား၊သမီးနှင့်အဖေအကိုလုပ်နေတာခံရဖို့ယုတ်မှုအရာအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ရန်အတွက်ဂရုစိုက်ပါ။ ကျွန်တော်ထင်တဲ့ဒီသင့်ရုံဖြစ်စံအရာအပေါ်နီးပါးဆိုအရွယ်ရောက်ပြီးပလက်ဖောင်း၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့မြင်ဖူးတယ်တစ်လျောက်ပတ်သောအမျိူးရှေးရှေး၏အဘယ်သူထွက်ရှိပါတယ်ရိုးရှင်းစွာသဘောမတူဘူး။ ကောင်းစွာ၊ထိုသူတို့အား–ကျနော်တို့အကြောင်းပြောမယ့်အသင်ျဂိမ်းကစားသောလူအလိုနှင့်မဆို၊ပြီးရင်သူတို့လိုချင်တဲ့တိုင်ကြားဖို့၊သူတို့သွားနှင့်ဒါကြောင့်သည်အခြားနေရာမှာနှင့်။, ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကြီးမြတ်ဆုံးသင်ျအရေးယူဆက်ပြီးလျှင်ဆိုလိုသည်အောင်လူအနည်းငယ်အမျက်ထွက်–ဒါကြောင့်ဖြစ်!
ကျနော်တို့လောလောဆယ်တွင်များ၏စုစုပေါင်း ၆၉ ဂိမ်းများထဲမှာသင်ျကွန်ပျူတာဂိမ်းများနှင့်အတူ၊တစ်ဦးထပ်မံ ၁၂ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်။ ကျနော်တို့ထုတ်ပြန်ဖို့လတ်ဆတ်တဲ့လွှတ်ပေးကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်တစ်ကြိမ် ၆ ရက်သတ္တပတ်၊ဒါကြောင့်သင်ပြန်လည်စစ်ဆေးပုံမှန်အခြေခံပေါ်မှာဘယ်အရာကိုမြင်မှအသစ်နှင့်အတူသင်ျကွန်ပျူတာဂိမ်းများနှင့်စိတ်ကူးတစ်ခုရနိုင်ဘယ်အရာ၏အနာဂတ်အကိုင်အဘို့အကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်း။ ဒါဟာတော်တော်ရူးတဲ့အခါသင်စဉ်းစား:ဒါကြောင့်အများအပြားအစက်အပြောက်အွန်လိုင်းခဲ့ကြဆန္ဒနှင့်အနိုင်ပေးတစ်လျောက်ပတ်သောအရေအတွက်ဂိမ်းနှင့်အတူဒါဇင်အမှုအရာ!, ဘယ်အရာကိုကျွန်ုပ်တို့ခေါင်းစဉ်အတော်လေးအထူးအမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်၊သူတို့ကလုံးဝသီးသန့်ကို–ဆိုလိုတာကိုရှာဖွေမည်မဟုတ်ကြောင်းသူတို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုနှင့်ထို့အပြင်အတွက်၊ဘယ်အရာမှအတွင်းဒီနေရာကနေလာခဲ့ပြင်ပအရင်းအမြစ်။ ကျနော်တို့ကြောင်းကရရှိသကဲ့သို့အမှန်တကယ်၊နှင့်ပြီမဟုတ်ဆိုရင်ပူးပေါင်းပြီးခင်၊ဤအရာအားလုံးကို ၆၀+ယုံဂိမ်းသွားအဖြစ်လုံးဝအသစ်သင်ဖို့။ မကျပါနဲ့ထိုဘီးမှာအိပ်ပျော်မိတ်ဆွေ:ဒီပါတီကပဲစတင်မယ့်အကြောင်းမင်းအတွက်အချိန်စောကိုဟုတ်မှန်သောအလားအလာနှင့်နာသင်ျကွန်ပျူတာဂိမ်းများ။, ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုပြုကြဒီနေရာမှာနှင့်ဤအကြောင်းကြောင့်၊ကျနော်တို့လုပ်ဖို့တာပေါ့ excel အချိန်နှင့်အချိန်နောက်တဖန်အ။ ချအဖွဲ့ဝင်မဆိုသည်အခြားဂိမ်းကစားခြင်းဝက်ဘ်ဆိုက်နဲ့ပဲတစ်နာရီကဒီမှာ–ဆိုရင်မပျော်၊ထားခဲ့ဖို့အခမဲ့ခံစားရ! စိုးရိမ်ပူပန်လိမ့်မယ်တရားစွဲဆိုအကံဇာပေးရုံကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်း။ ကောင်းစွာ၊ဖတ်အောက်–ကျွန်မရရှိပါသည်အရာတစ်ခုခုကိုသင်ပြောပြဖို့အကြောင်းကိစ်စတှငျ!
မသာကျွန်တော်ကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုဒီနေရာမှာလုံးဝတာဝန်ခံအခမဲ့၊ဒါပေမယ့်ဘာမှမရှိဘူးရဲ့အတွင်းအဖွဲ့ဝင်တဦးရဲ့ဧရိယာအကျသင်သည်တစုံတခု။ အားလုံးဂိမ်းမှာကစားနိုင်ပါတယ်စတင်ထံမှပြီးမှ၊မရှိကန့်သတ်အပေါ်သင့်ရဲ့တိုးတက်မှုများကိုမည်သည့်အချက်မှာ၊ရင်းအဖွင့်ဖွင့်သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်။ ဒါကတော်တော်စုတ်အေးမြ၊မှန်သော? ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဤအမျိုးအစားစီမံကိန္းချဉ်းကပ်မှုအတွက်အောင်မြင်င့္ထားဂိမ်းကစားစက်မှုလုပ်ငန်းအခုလိုချမှတ်ရန်စိတ်ကူးနိုင်အောင်ကျနော်တို့ပြပွဲလူတိုင်းကိုယ့်ကိုဘယ်လိုအောင်မြင်အောင်ကနိုင်မှကြွလာသောအခါအရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲ။, ကျွန်တော်တို့စောင့်ရှောက်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအခမဲ့ကစားရန်အစဉ်အမြဲသင်တို့အဘို့၊အဓိပ္ပါယ်ကခင်ဗျားဘယ်တော့မှဖြစ်သွားနှင့်အတူစိတ်ပျက်သည်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကယ်မလွှတ်။ မပျော်ရွှင်ထုတ်ကုန်နှင့်အတူ? ထို့နောက်ထွက်ခွာ! မလိုအပ်ရှိပါတယ်ဆွဲထားဖို့ပတ်ပတ်လည်ကဒီမှာဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊သင်မဝယ်မှတစုံတခု။ ဒါဟာအစတပ်အဖွဲ့သောသေချာစေရန်အားလုံးဂိမ်းများကိုထထွက်ရှိပါတယ်လျောက်ပတ်သောအနိုင်ပေးဂိမ်းကစားနှင့်အတူသူတို့ဘာလိုချင်:အလွန်ကြီးစွာသောဂိမ်းနှင့်လိင်ပျော်စရာ။, သင်ရရှိပါသည်တိထားပါဖြစ်ဖို့ဒီဂိမ်းအတွက်ထင်တယ်ရှေ့ဆက်မသွား၊သင်ျကွန်ပျူတာဂိမ်းလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်တယောက်ကိုငရဲ၏အလုပ်နှင့်အတူပေးဂိမ်းကစားအတူထွက်ရှိပါတယ်အတိအကျသူတို့ဘာလိုချင်:ကုန်ကြမ်းဂိမ်းကစားပျော်မွေ့တစ်ခုနှင့်အတူပူပြင်းသင်ျလိမ်။
ငါ shilled အဖြစ်ခက်ခဲငါတတ်နိုင်သမျှအတိုင်းများအတွက်သင်ျကွန်ပျူတာဂိမ်းများ:ကျေးဇူးအများကြီးဖတ်မှအနှောက်အယှက်အားဖြင့်ဤအရာအားလုံးနှင့်သောအခါငါနောက်သတိထားပါထည့်သွင်းစဉ်းစားအချိန်၊ဆုံးဖြတ်ရဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်။ သင်ကိုယ်တိုင်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်မိနစ်အနည်းငယ်အတွက်၊ဘောင်းဘီ၊အုန်းသီးရေနံ slathered၏အရိုး–အပယ် jerking အကွောငျးဂိမ်းတစ်ခု၏အာရုံစူးစိုက်လုံးဝယုတ်ပတ်ပတ်လည်သင်ျ။ ဤသည်အကောင်းဆုံးကွန်ပျူတာဂိမ်းကစားများအတွက်ဦးတည်မိသားစု-သာလိင်၊ဒါကြောင့်တစ်ဦးအချပ်အခုအချိန်မှာသင်ပါလိမ့်မယ်၊ထာဝရကျေးဇူးတင်ကြောင်းတစ်ဦးပွဲချင်းပြီးဒီလိုအမှန်တကယ်တည်ရှိ!, အကောင်းကံနှင့်သေချာအောင်မှတ်မိဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးမှာသင်ျဂိမ်းပျော်စရာကိုသာအစက်အပြောက်သင်လိုအပ်အနှောင့်အယှက်နှင့်အတူကဒီမှာသင်ျကွန်ပျူတာဂိမ်းများသည်ပျား၏ဒူးထောက်။!